ဒီနေ့မှာကျင်းပတဲ့ စည်ဖြိုးနဲ့ခင်လွှမ်းတို့ရဲ့မင်္ဂလာဦးဆွမ်းကျွေးပွဲလေးကို တက်ရောက်ချီးမြှင့်ရင်း အပျော်တွေကူးစက်နေတဲ့ ဖူးပွင့်သခင် - TGI Daily News
ဒီနေ့မှာကျင်းပတဲ့ စည်ဖြိုးနဲ့ခင်လွှမ်းတို့ရဲ့မင်္ဂလာဦးဆွမ်းကျွေးပွဲလေးကို တက်ရောက်ချီးမြှင့်ရင်း အပျော်တွေကူးစက်နေတဲ့ ဖူးပွင့်သခင်
မင်းသမီးချောလေး ဖူးပွင့်သခင်ကတော့ ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေနဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေရိုက်ကူးရင်း အောင်မြင်နေတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ လူချစ်လူခင်ပေါများတဲ့ ဖူးပွင့်သခင်က အနုပညာမောင်နှမတွေအားလုံးနဲ့လည်း ရင်းနှီးချစ်ခင်စွာနေထိုင်တတ်သူလေး ဖြစ်ပါတယ် ။ ဖူးပွင့်သခင်က မင်းသားချောလေးစည်ဖြိုးနဲ့ဆိုရင်လည်း အရမ်းကိုရင်းနှီးတဲ့ အနုပညာမောင်နှမတွေ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒါကြောင့် ဖူးပွင့်သခင်က ဒီနေ့မနက်မှာ ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ သရုပ်ဆောင်စည်ဖြိုးရဲ့မင်္ဂလာဆွမ်းကျွေးပွဲလေးကို တက်ရောက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ စည်ဖြိုးနဲ့ ခင်လွှမ်းတို့စုံတွဲလေးကတော့ လူကြီးမိဘတွေအ‌ရှေ့မှာ နှစ်ဦးသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးရင်း မင်္ဂလာဦးဆွမ်းကျွေးပွဲကိုပါ ကျင်းပခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီပွဲလေးကိုတော့ အနုပညာအသိုင်းအဝိုင်းကလူတွေ တော်တော်များများ တက်ရောက်ခဲ့ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
အခုလည်း ဖူးပွင့်သခင်က “5.11.2020. ကိုကြီးစည်ဖြိုးနဲ့ မခင်လွှမ်းတို့ရဲ့ မင်္ဂလာဆွမ်းကျွေး” ဆိုပြီး ပွဲကပုံရိပ်လေးတွေကို တင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဖူးပွင့်သခင်ကတော့ စည်ဖြိုးတို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့မင်္ဂလာပွဲလေးမှာ အပျော်တွေကူးစက်ရင်း အားလုံးနဲ့ အမှတ်တရ ဓာတ်ဖမ်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ကဲ ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် စည်ဖြိုးနဲ့ ခင်လွှမ်းရဲ့မင်္ဂလာဆွမ်းကျွေးပွဲကို တက်ရောက်ချီးမြှင့်ခဲ့တဲ့ ဖူးပွင့်သခင်ရဲ့ပုံရိပ်တွေကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော် ။
Source and Photo Credit-“Actress Phoo Pwint Thakhin-ဖူးပွင့်သခင်
ဒီနမှေ့ာကငျြးပတဲ့ စညျဖွိုးနဲ့ခငျလှမျးတို့ရဲ့မင်ျဂလာဦးဆှမျးကြှေးပှဲလေးကို တကျရောကျခြီးမွှငျ့ရငျး အပြျောတှကေူးစကျနတေဲ့ ဖူးပှငျ့သခငျ
မငျးသမီးခြောလေး ဖူးပှငျ့သခငျကတော့ ဗီဒီယိုဇာတျကားတှနေဲ့ ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးတှရေိုကျကူးရငျး အောငျမွငျနတေဲ့ အနုပညာရှငျတဈဦးပဲ ဖွဈပါတယျ ။ လူခဈြလူခငျပေါမြားတဲ့ ဖူးပှငျ့သခငျက အနုပညာမောငျနှမတှအေားလုံးနဲ့လညျး ရငျးနှီးခဈြခငျစှာနထေိုငျတတျသူလေး ဖွဈပါတယျ ။ ဖူးပှငျ့သခငျက မငျးသားခြောလေးစညျဖွိုးနဲ့ဆိုရငျလညျး အရမျးကိုရငျးနှီးတဲ့ အနုပညာမောငျနှမတှေ ဖွဈပါတယျ ။
ဒါကွောငျ့ ဖူးပှငျ့သခငျက ဒီနမေ့နကျမှာ ကငျြးပပွုလုပျတဲ့ သရုပျဆောငျစညျဖွိုးရဲ့မင်ျဂလာဆှမျးကြှေးပှဲလေးကို တကျရောကျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ ။ စညျဖွိုးနဲ့ ခငျလှမျးတို့စုံတှဲလေးကတော့ လူကွီးမိဘတှအေ‌ရှမှေ့ာ နှဈဦးသဘောတူလကျမှတျရေးထိုးရငျး မင်ျဂလာဦးဆှမျးကြှေးပှဲကိုပါ ကငျြးပခဲ့ကွတာ ဖွဈပါတယျ ။ ဒီပှဲလေးကိုတော့ အနုပညာအသိုငျးအဝိုငျးကလူတှေ တျောတျောမြားမြား တကျရောကျခဲ့ကွတာပဲ ဖွဈပါတယျ ။
အခုလညျး ဖူးပှငျ့သခငျက “5.11.2020. ကိုကွီးစညျဖွိုးနဲ့ မခငျလှမျးတို့ရဲ့ မင်ျဂလာဆှမျးကြှေး” ဆိုပွီး ပှဲကပုံရိပျလေးတှကေို တငျထားတာ ဖွဈပါတယျ ။ ဖူးပှငျ့သခငျကတော့ စညျဖွိုးတို့ဇနီးမောငျနှံရဲ့မင်ျဂလာပှဲလေးမှာ အပြျောတှကေူးစကျရငျး အားလုံးနဲ့ အမှတျတရ ဓာတျဖမျးခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ ။ ကဲ ခဈြပရိသတျတှအေတှကျ စညျဖွိုးနဲ့ ခငျလှမျးရဲ့မင်ျဂလာဆှမျးကြှေးပှဲကို တကျရောကျခြီးမွှငျ့ခဲ့တဲ့ ဖူးပှငျ့သခငျရဲ့ပုံရိပျတှကေို ပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော ။
Source and Photo Credit-“Actress Phoo Pwint Thakhin-ဖူးပှငျ့သခငျ
အရမ်းအားကိုးရတဲ့ ချွေးမလောင်းလေးခင်လွှမ်းက နေမကောင်းဖြစ်နေလို့ ကိုယ်တိုင်ဂရုစိုက်ပေးနေတဲ့ စည်ဖြိုးရဲ့မိခင်
ယနေ့မှာပဲ ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ တစ်စက္ကန့်သီချင်းကို သီဆိုခဲ့တဲ့ အဆိုတော်စိုးမိုးမင်း
ထိုင်းမလေး Jessie ဆီက သူ့ရဲ့နာမည်ကို မပီတပီနဲ့ ခေါ်သံကြောင့် သဘောကျမဆုံးဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ယုန်လေးရဲ့ ဗီဒီယို